Kuma Resorts eSandals Konke Okudingayo Uthando
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Amahhotela nezindawo zokungcebeleka » Kuma Resorts eSandals Konke Okudingayo Uthando
Izindaba zase-Antigua neBarbuda • Izindaba zeBahamas Breaking • Izindaba zeBarbados Breaking • Izindaba Ezintsha • I-Caribbean • Izindaba zeGrenada Breaking • Industry Hospitality Industry • Amahhotela nezindawo zokungcebeleka • Izindaba zaseJamaica • Izindaba Zokunethezeka • Izindaba • Izindawo zokuhlala • Imishado Yezothando Izinyanga Zekhefu • Izindaba zaseSanta Lucia • Ezokuvakasha • Iziphesheli Zokuvakasha | Izeluleko Zokuhamba • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izindaba Ezihlukahlukene
Izindawo zokungcebeleka zezimbadada ezindaweni zokungcebeleka zaseCaribbean zinikeza amaholide angcono kakhulu okubandakanya wonke umuntu emibhangqwaneni esothandweni.
Jabulela amaholide kanokusho ahlanganisa konke eSandals Resorts eCaribbean futhi ubone ukuthi kungani enikeza amaholide othando kakhulu emibhangqwaneni ethandana nokufakwa okungaphezulu kwekhwalithi kunanoma iyiphi enye indawo yokunethezeka yasolwandle.
Izimbadada zeSandals zifaka iphakethe elibandakanya konke emhlabeni.
Izithandani zingajabulela amabhishi amahle anesihlabathi esimhlophe, indawo yokudlela enezinkanyezi ezinhlanu ye-Global Gourmet ™, indawo yokuhlala enhle, utshwala obungenamkhawulo be-premium, imidlalo ethokozisayo yamanzi, nokuningi.
Izimbadada beziyinkampani ebamba iqhaza emhlabeni wonke ehamba phambili emhlabeni iminyaka engama-25 ilandelana evela kuma-World Travel Awards.
Cabanga ufika egumbini lokuphumula elikhethekile esikhumulweni sezindiza, ukhishwe yisithuthi esilindile, bese ungena endaweni yokubungaza lapho kufakwe khona yonke into. Bona ngeso lengqondo inkululeko yokungena kunoma iyiphi indawo yokudlela e-resort futhi ujabulele noma yini oyifunayo, ukujoyina izinto ezingadingi ukuthi ukhiphe ikhadi lakho lasebhange noma usayine ithebhu, ngaphandle kokubala ithiphu noma isisa. Leyo yinjabulo emsulwa yeholide ebandakanya konke. Futhi kumaSandals, konke okubandakanya kubusa kakhulu.
Yonke indawo yokuchithela olwandle yeSandals ihlala ngqo ogwini olumangalisayo ezindaweni eziyisithupha ezinhle kakhulu eziqhingini zaseCaribbean, isifunda esidume ngobubanzi baso besihlabathi esimhlophe obungapheli, amanzi amahle oluluhlaza nokushona kwelanga kwezothando. Ukusuka emgudwini ofudumele we-reggae waseJamaica kuya ekushayweni okuyinkimbinkimbi kweBahamas kanye nokusukela ebukhosini bukaSanta Lucia wentaba-mlilo kuya ekuheheni okungajwayelekile kuka-Antigua.
Izindawo Ezikhethekile ZaseCaribbean
Izimbadada zinezindawo zokuhlala zikanokusho kakhulu lapho ziye zacabanga ngakho konke ukwenza ukuhoxa kube kuhle kakhulu emibhangqwaneni esothandweni. Kusuka emaVillas angaphezulu kwamanzi kanye nezindawo ezibabazekayo ezinamawa angama-180-degree, ukukhulisa amaSkypool Butler Suites anamachibi angaphezulu onqenqemeni lwamanzi kanye namaRondoval Suites ayingqayizivele, Izindawo zokuhlala zesiginesha seSandals ziqinisekile ukukhuphula uthando ezindaweni eziphakeme.
Iziqhingi ezizimele zase-Offshore
Ngezimbadada ezikhethekile ze-Offshore Islands izivakashi zithola amaholide amabili asezindaweni ezishisayo ngentengo eyodwa. Kutholakala e- Izimbadada Royal Caribbean futhi Izimbadada Royal Bahamian imizuzu nje ukusuka e-resort enkulu.
Ukuthwebula Amachibi Anomoya Wezothando
Hlaziya ukuthula okupholile kwamachibi acwebezelayo. Bamba izikhathi zokuthula buthule phakathi kokuthula kwechibi lamachibi anefomu lamahhala, jabulela amandla wamabha wamachibi wethu wokubhukuda asayinayo, noma uzwe ubuhle bamachibi wethu okungena zero angukushaya kwenhliziyo kwezindawo zethu zokungcebeleka. Elinye lamachibi ethu linobuntu obuhlukile futhi iningi lawo yizinyathelo nje ezisuka olwandle.
Imishado nezikhathi zekhefu ezindaweni zokuvakasha ezithandwa kakhulu emhlabeni
KwaSandals, izindaba zothando zezivakashi zehlukile futhi zikhethekile… nemishado yabo nayo. Kungakho bethathe amaphakheji omshado esikhundleni sabahleli bomshado, benza isipiliyoni somuntu siqu saba ngesomuntu uqobo. Konke okungeziwe kungeziwe ukwenza usuku olukhethekile lube ngokungaphezu kokujwayelekile. Ngakho-ke tshela iSandals iphupho lakho, bazoliphilisa.
Yonke Iphakheji Yezimbadada Ezibandakanya Konke Lihlanganisa:
Izindiza ezisuka e-Doha ziya e-Almaty ku-Qatar Airways manje
I-WTTC: Umkhakha wezokuVakasha nezokuvakasha eFrance uzoqala…
Okudingayo ukwazi ngokuthunyelwa kwesizini yeholide ...
Indlela Yokuhlonza Kalula Ukuhamba Okusimeme
I-Israel Iphinde Yavulelwa Abahambi Bamazwe Ngamazwe
Ukubambisana kweDelta ne-TSA streamlines check ...
I-United Airlines: Okuningi iJordani, iPortugal, iNorway kanye ...
Ubhadane luguqule kanjani emfundweni yokungenisa izihambi?
ITaliban ilawula ngokuphelele uKabul's Hamid ...
Abaholi Bezizwe Eziningi Abasebenza ku-COVID-19: Inkinga ...
Ukufika Kwezokuvakasha Kwamazwe Ngamazwe e-Afrika kanye ne...
IFord Motor Company ihlonipha iBorgWarner ngomhlaba ...
Isizini entsha yaseYurophu yokushushuluza ilenga esilinganisweni
I-ATB: Akusekho ukulwa okunesizungu kwe-African Tourism Survival
I-Air India: Ekugcineni Iyahamba?
I-Thailand, iJalimane, iCanada manje yabelana ngeTourism entsha ...
Uhambo Oluya Phambili Usuku Lokuqala: Ubuhlakani bokwenziwa bungokoqobo